မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): သုတရသစာအုပ်မျိုးစုံ(၂)
ချစ်စံဝင်း _ တီထွင်မှုမှော်ဝိဇ္ဖာကြီး အယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင်
ချစ်စံဝင်း _ တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား
ချစ်စံဝင်း _ လူငယ်များကမေးကြသည် ၂
ချစ်စံဝင်း _ အရည်အသွေး
ချစ်ဦးညို _ နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင်
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ ကံနှင့်တမလွန်ဘ၀
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ ဓမ္မကဗျာ ပဒေသာ
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ ပစ္စည်းလေးပါးတရားတော်
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ ဘ၀အတန်တန် ကံအထွေထွေ
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ လူငယ်သင် အခြေပျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ
ချမ်းမြေ့ဆရာတော် _ သစ္စာလေးပါးတရားတော်
ငွေဥဒေါင်း _ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ပထမတွဲ
ငွေဥဒေါင်း _ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ဒုတိယတွဲ
ငွေဥဒေါင်း _ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ တတိယတွဲ
ငွေဥဒေါင်း _ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ စတုတ္ထတွဲ
ငွေဥဒေါင်း _ ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ပဉ္စမတွဲ
စမ်းစမ်းနွဲ့ _ နေပန်းပွင့်၏အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ်
စိုးဝင်းထွဋ် _ ဘ၀တစ်လျှောက်စိတ်အေးချမ်းစွာနေသွားနည်း
ဆရာလွန်း _ ပိဋကတ်အသွား.နတ်လမ်းညွှန်အဆန်း
ဆန်းလွင် _ ဥာဏ်လမ်းပေါ်လျှောက်လူတစ်ယောက်အကြောင်း
ညိုသောင်း _ ဘာသာကြီးလေးခု အနှစ်သာရများ
တက်တိုး _ လောကနီတိ .အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာ
တက်တိုး _ သောကကင်းဝေးနေနိုင်ရေး
တင်သန်းဦး _ စန္ဒီမိုးဦးဖြူ
ထေရ၀ါဒလူငယ်များ _ ဓမ္မစေတီရှင်းတမ်း စာတန်းလွှာ
ဒဂုံခင်ခင်လေး _ ရတနာပုံ၏နိဒါန်းနှင့်နိဂုံး ဒုတိယပိုင်း
ဒဂုန်တာရာ _ မေ
ဒေါ်အုန်း _ ပါဠိစာပေသမိုင်း
ဒေါက်တာဓမ္မပီယ _ နိဗ္ဗာန်အယူအဆ ကို ထေရ၀ါဒရှုထောင့်မှလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
ဒေါက်တာဓမ္မပီယ _ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ
ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ _ ရာဇာဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း
ဒေါက်တာဖေမောင်တင် _ မြစေတီ-မွန်ကျောက်စာ
ဒေါက်တာဖေမောင်တင် _ ရွှေစည်းခုံမွန်ကျောက်စာ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ခေတ်အမြင်နှင့် သိမှတ်စရာ ဗုဒ္ဓဘာသာအကျဉ်း
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဆေးမကူဘဲငြိမ်းအေးနည်း
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်ဒါန
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်ဓမ္မ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်ဗုဒ္ဓ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်ဘာဝနာ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်သရဏဂုံ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်သီလ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မြတ်သံဃာ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မေတ္တာနှင့် သစ္စာသရုပ်ဖော်
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မေတ္တာနှင့် သစ္စာအဖွင့်
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ မှန်ကန်သောဘ၀အမြင်
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ လိမ္မာယဉ်ကျေး တို့ရင်သွေး
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ၀ိပဿနာဂုဏ်ထူးဆောင်တော်ကူးဆရာတော်နှင့် ထူးဆန်းစွာရောဂါပျောက်ခြင်းများ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ သာသနာ့တံခွန် စံပြပုဂ္ဂိုလ်ထူး သပြေကန်ဆရာတော်ဘုရား
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ သောက.ဒေါသ.အတ္တ ဘ၀အခက်အခဲဟူသမျှ ကျော်လွှားအံ့
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ သိပ္ပံနယ်လွန် ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ပထမတွဲ
ဒေါက်တာတင်မောင်သန်း _ လူနဲ့မူ
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် _ ဖို + မ ဆက်ဆံရေး
နီကိုရဲ _ နှလုံးသား နှင့်ကန်တဲ့ဘော်လုံး
နေ၀င်း _ ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများ
နန္ဒသူ _ ဟယ်ရီပေါ်တာနှင့်ပြဒါးရှင်လုံး
ပါရဂူ _ ဗုဒ္ဓအမြင်
ပါရဂူ _ နိဗ္ဗာန်
ပါရဂူ _ ဘ၀ခရီးသည်
ပန်းငွေရုံဆရာတော် _ ဒေသနာပန်းခင်း တတိယတွဲ
ပြည့်ပိုင်မှူးအိမ် _ အချစ်ရဲ့နက္ခတ်ာတို့တွင် အောင်မြင်ပေါက်မြောက်ခြင်း
ဖိုးကျော့ _ နတ်စောင့်ပျားနှင့် သားရဲတို့ရွာဖါးအောက်တောရဆရာတော် + _ သမထဘာဝနာနှင့် ၀ိပဿန
ဗဂျီအောင်စိုး _ ရိုးရာမှသည် ခေတ်သစ်ဆီသို့
ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် _ နယူးဇီလန်တရားတော်
ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် _ သြ၀ါဒစကားများ
ဗိုလ်အေးမောင် _ ၀ဏ္ဏပပ
မလေးငြိမ် — အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများ
မာဏ၀ _ မိလိန္ဒပဥှာ
မာလာ _ နှစ်ထပ်ဆလံ
မိုးဆက်လင်းထက် _ သိုက်
မင်းဓါတု _ ရင်သားကင်ဆာသိကောင်းစရာများ
မင်းသုဝဏ် _ သပြေညို
မင်းသိင်္ခ _ တူသော..၀တ္ထုတိုများ
မင်းသိင်္ခ _ မင်းမေးတိုင်း ငါကဖြေရမှာလား
မာန်လည်ဆရာတော် _ မဃဒေ၀လမ်းညွှန်နီတိများ
မောင်ရေအေး _ ခေတ်ပြိုင် အိုင်ကျူ
မြင့်စိုးလှိုင် _ သံယောဇဉ်ဖေဖေ
မြင့်ထွန်း _ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမွိုင်သို့လျှို့ဝှက်ခရီး
မြန်မာသမားတော်ကြီးများ _ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ , သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁
ယောဆရာတော် _ ဘ၀လမ်းညွှန်လက်ဆောင်မွန် .ပထမတွဲ
ရဝေနွယ် _ မြင့်မြတ်သူတို့၏ အလုပ်
ရဝေနွယ် _ အတွေးများနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း
ရန်အောင် _ အိမ်ထောင်ရေး အဘိဓမ္မာ
လူထုစိန်ဝင်း _ ပထမတန်းစားစိတ်ဓါတ်
လင်းတည်ဦး _ မြင်းဦးခေါင်းနှင့် ကောင်းကင်သတို့သမီး.ပိုးလမ်းမပုံပြင်များ
လယ်တီပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီး _ သာသနသမ္ပတ္တိ ဒီပနီ
၀င်းငြိမ်း _ အမှတ်တရ ရွှေ၆၀
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန _ ဗုဒ္ဓဘာသာလက်စွဲကျမ်း ပထမတွဲ
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန _ ၀ိနိစ္ဆယလက်စွဲသီလ၀ _ ဗုဒ္ဓအံတော်သမိုင်း
သုခ _ ဇေယျတုသဗ္ဗမင်္ဂလံ
သုခ _ သဗ္ဗေသတ္တာနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ
သုခ _ အကျော်ဒေးယျ ဗုဒ္ဓသမီးတော်များ
သုခမိန်လှိုင် _ အငြိမ့်
သဲအင်းဂူဆရာတော် _ မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်
သန်းသန်းတင့် _ မင်္ဂလာအစစ် နှင့် မျိုးဆက်သစ်
အကြည်တော် _ မိန်းမဋီကာ
အရှင်ကုမာရ _ ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျကျင့်သုံးနေထိုင်နည်း .ဒုတိယတွဲ
အရှင်ကောဝိဒ _ သန်းကောင်ယံ အမေးအဖြေများ
အရှင်ဇနကဘိဝံသ _ နံနက်ခင်းသြ၀ါဒများ
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ မဟာဂန္ဓာရုံဝတ်ရွတ်စဉ်
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ၀ီထိနှင့် သုံးချက်စု ဘာသာဋီကာ
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ အဆိုအမိန့်များ
အရှင်ဇ၀န _ ဘ၀နှင့်ရင်းရသော အတွေးအမြင်များ ၁.
အရှင်ဆေကိန္ဒ _ သတိရှိဖို့ သတိထားကြစို့
အရှင်ဆေကိန္ဒ _ လူတိုင်းသိစေချင်ပါသည်
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ စိတ်လျှော်ဖွတ်တဲ့အလုပ်
အရှင်နာယကာလင်္ကာရ _ ဘုရားရှင်တို့၏လက္ခဏာတော်(၃၂)ပါး
အရှင်ဝီရိယ _ ဖောင်ဖျက်တိုက်ပွဲ နှင့် မထေရ်မြတ်တို့စကားဝိုင်း(၆)
အရှင်ဝီရိယ _ ဘုန်းရယ်၊ကံရယ်၊ကုသိုလ်ရယ်
အရှင်ဝီရိယ _ လောကကျက်သရေ
အရှင်ဣန္ဒက _ ချမ်းမြေ့မြိုင်ဆရာတော်၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်းနှင့် သြ၀ါဒကောက်နုတ်ချက် ၅၀
အရှင်ဣန္ဒက _ ချမ်းသာစစ်ကို သိမြင်လိုပါက
အရှင်ဣန္ဒက _ ဒါရုက္ခာပမသုတ္တန် တရားတော်
အရှင်ဣန္ဒက _ မေတ္တာဂုဏ်ရည်
အရှင်ဣန္ဒက _ သတိယှဉ်မှ တရားမြင်
အရှင်ဧသိက _ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ
အောင်ဆန်းဆရာတော် _ ရင့်ကျက်စိတ်ထားဥာဏ်စွမ်းအားဖြင့်
ဦးကံမြင့် _ မြန်မာရာဇ၀င်ပုံပြင်ဝတ္ထု
ဦးကျော် _ လောကီပညာ ပဒေသာကျမ်း
ဦးကျော်ရန် _ မူလပေါရာဏဒီပနီကျမ်းဦးကျော်လှ _ သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ်
ဦးကြည် _ မစ္ဇျိမပဋိပဒါရှင်းချက်
ဦးခင်မောင်ကြီး _ ဓမ္မပဒအဆုံးအမများ. ပါဠိ-မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်
ဦးချစ်မောင် _ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတ မာတိကာကျမ်း
ဦးငြိမ်းမောင် _ ရှေးဟောင်းမြန်မာကျောက်စာများ တတိယတွဲ
ဦးစန်းငွေ _ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ဖြေကြားခဲ့ရသော မေးခွန်းနှင့် ပြဿနာများပေါင်းချုပ်
ဦးဥာဏိန္ဒ _ ၀ံသာနုရက္ခိတ၀ိနိစ္ဆယ ဒီပနီ
ဦးဌေးလှိုင် _ မေတ္တာဝါဒ
ဦးဌေးလှိုင် _ ရတနာသုံးပါးကျေးဇူး ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ
ဦးဌေးလှိုင် _ သီဟိုဠ်ခေတ် စံတော်ဝင်အရိယာများ
ဦးတင်မြင့် _ ဆရာတော်ကြီးရှစ်ပါး၏ ၀ိပဿနာရှုနည်းညွှန့်ပေါင်း
ဦးထွန်းလှ _ တရားတောင်း၊ဆုပေး၊ဆုတောင်း ရေစက်ချအမျိုးမျိုး
ဦးနု _ မိတ္တဗလ ဋီကာ
ဦးနု _ မြတ်တရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ
ဦးပညာသာမိ _ လူငယ်များအတွက် အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း
ဦးမောင်မောင်လေး _ ဗုဒ္ဓ၏ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများ ပေါင်းချုပ်. ဒုတိယတွဲ
ဦးရွှေအောင် _ ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ် ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့
ဦးဝဏ္ဏသီရိ _ ညီတော်အာနန္ဒာ၏ တစ်သက်တာမှတ်တမ်း ဒုတိယတွဲ
ဦးအရိယဓမ္မ _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒပြဿနာများ
ဦးအေးမောင် _ စိတ်ပညာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရား
ဦးအေးမောင် _ စိတ်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
ဦးအေးမောင် _ ပိဋကတ်မှ ဗုဒ္ဓနှင့် ဓမ္မ
ဦးအေးမောင် + _ သေသည်၏အခြားမဲ့၌. သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
ဦးအောင်ညွှန့်ဝင်း _ နိပါတ်တော်လာဇာတ်တော် ငါးရာငါးဆယ် အနှစ်ချုပ်
၀န်ခံချက်။ ။ www.ashinkumara.com မှပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
Author Anonymous at 5:15:00 PM
Thank you so much.this is I really needs one.